ကမ္ဘာကျော် ဆရာတော် ၏ လျှို့ဝှက်အသံဖိုင် | Mizzima Myanmar News and Insight
ကမ္ဘာကျော် ဆရာတော် ၏ လျှို့ဝှက်အသံဖိုင်
ဦးဝီရသူ ။ ။ ဘယ်သူပါလိမ့် ။
ဦးကျော်လှိုင် ။ ။ ဒကာကြီး ဦးကျော်လှိုင်ပါ ဘုရား ။
ဦးဝီရသူ ။ ။ ဒကာကြီး ဦးကျော်လှိုင် ဘယ်သူ့ ဖုန်းကြီးနှင့် ဆက်နေတာလဲ ။
ဦးကျော်လှိုင်။ ။ တပည့်တော် ဖုန်းပါ ဘုရား ။ ရုံး ဖုန်းပါ ဆရာတော်ဘုရား ရုံးဖုန်းပါ ။
ဦးဝီရသူ ။ ။ပြော ။ ဒကာကြီး ။
ဦးကျော်လှိုင်။ ။ အထူးမဟုတ်ပါဘူးဘုရား ။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သံဃာ့နာယကအဖွဲ့ ရုံးက ပေးပို့လိုက်တဲ့ စာလေး ဆရာတော်ဆီ လာကပ်ချင်လို့ပါဘုရား ။ ဘယ်အချိန်လောက် လာခဲ့ရမတုန်းလို့ အဲဒီဟာလေး လှမ်းလျှောက်တာပါဘုရား ။ တပည့်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်လာ ကပ်မှာပါ ဘုန်းဘုန်းဘုရား ။
ဦးဝီရသူ ။ ။ဖမ်းမိန့်လား ။ မဟုတ်ပါဘူး ။
ဦးကျော်လှိုင်။ ။ မဟုတ်ပါဘူးဘုရား ။
ဦးဝီရသူ ။ ။ဖမ်းဝရမ်းလား။ ခင်ဗျားတို့ ဘာတုန်း ၊ ဖမ်းဝရမ်း မဟုတ်ရင် သမ္မန်စာလား ။
ဦးကျော်လှိုင်။ ။ ဟိုဟာပါပဲ ဘုရား။ သြဝါဒပေးဖို့ ညွှန်ကြားလာတဲ့ကိစ္စလို့ ပါပါတယ် ဘုန်းဘုန်း ဘုရား ။
ဦးဝီရသူ ။ ။ဟုတ်လား ။
ဦးကျော်လှိုင်။ ။ ဟုတ်ပါတယ် ။. ဘုန်းဘုန်း ဘုရား ။
ဦးဝီရသူ ။ ။ အဲဒီ့မှာ သင်္ကန်းချွတ်ဖို့ အစီအစဉ် ရှိလား ။
ဦးကျော်လှိုင်။ ။ သြဝါဒပေးဖို့ ဆိုမှတော့ ၊ ရှင်းပါတယ် ဘုရား ။
ဦးဝီရသူ ။ ။ အဲဒီဟာမေးတာ သင်္ကန်းချွတ်ဖို့ အစီအစဉ်ပါ ၊ မပါ။
ဦးကျော်လှိုင်။ ။ သင်္ကန်းချွတ်တာက ဆရာတော်လည်း စာတတ်ပေတတ်ပဲ ဘုရား။ သြဝါဒပေးရုံနှင့် သင်္ကန်းချွတ်တာမှ မရှိဘဲနဲ့ ဘုန်းဘုန်းကလည်း ။
ဦးဝီရသူ ။ ။ အဲဒီကိုခေါ်ပြီး အဲဒီကျမှ သင်္ကန်းချွတ်ပြီး ထောင်ထဲထည့်မလို့လားလို့ ။
ဦးကျော်လှိုင်။ ။ မဟုတ်ပါဘူးဘုရား။ အဲဒီဟာကတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ဒီမှာတော့ ရှင်းပါတယ်ဘုန်းဘုန်းဘုရား ။ နိုင်ငံတော် သံဃာ့မဟာနာယက အဖွဲ့က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်း ဖြစ်ပွားသော ကိစ္စဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သံဃာ့ နာယက အဖွဲ့က တဲ့ ဦးဝိစိတ္တာဘိဝံသ (ဦးဝီရသူ) ကိုခေါ်ယူ သြဝါဒပေးရန်လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့လို့ ဆရာတော် ဘဒန္တ အဂ္ဂသာမိ တိပိဋက အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ ဥက္ကဋ္ဌ ဆရာတော် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သံဃာ့ နာယက အဖွဲ့က ဘုန်းဘုန်းကို ပင့်တာပါဘုရား ။
ဦးဝီရသူ ။ ။ အဲဒီဆရာတော်က ဘယ်ကျောင်းတိုက် ဘယ်မြို့နယ်လည်း မသိဘူး ။
ဦးကျော်လှိုင်။ ။ အဲဒီဥက္ကဋ္ဌတော့ တပည့်တော်လည်း ရန်ကုန်တိုင်းဆိုတော့ ကျောင်းတော့ ကောင်းကောင်းမသိဘူး ဘုရား ၊
ဦးဝီရသူ ။ ။ မြို့နယ်လည်း မသိလောက်ဘူးပေါ့နော် ။
ဦးကျော်လှိုင်။ ။ ရွှေတိဂုံနားက ဘုန်းဘုန်း ၊ ကြားတောရ ၊ တိုင်းသံဃာနာယက ရုံးမှာ လုပ်မှာပါဘုရား ။ ရွှေတိဂုံဘုရား အရှေ့မုဒ်က ။
ဦးဝီရသူ ။ ။ရုံးတော့ ကျုပ်သိတယ်လေ ။
ဦးကျော်လှိုင်။ ။ တင်ပါ့ ။အဲဒီမှာလုပ်မှာပါဘုရား ။ ၃၀ ရက် ၅ လ ၂၀၁၉ ကြာသပတေးနေ့တဲ့ ၁၄းဝ၀ နာရီပါတဲ့ ဘုရား ဘုန်းဘုန်း ။ သို့ဖြစ်ပါ၍ နိုင်ငံတော်သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားချက်နှင့် အညီဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အတွက် ဦးဝိစိတ္တာဘိဝံသ (ဦးဝီရသူ) အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပ ပြုလုပ်မည့် သြဝါဒပေးပွဲ အခမ်းအနားသို့ ကြွရောက်ပါရန် ပင့်လျှောက်ပါသည် ဘုရားတဲ့ ။ အဲဒီလိုပါ ပါတယ် ဘုန်းဘုန်း ဘုရား ။
ဦးဝီရသူ ။ ။ ခင်ဗျားတို့ ကမ္ဘာအေးကပဲ ကျုပ်ကို ၅၀၅ (ခ) တွေရော ၊ ၁၂၄ (ခ) တွေနှင့်ရော စွဲဖို့ ဆိုပြီး ၊ စီစဉ်နေတာဆို၊
ဦးကျော်လှိုင်။ ။ အဲဒီဟာတော့ တပည့်တော်တို့ ဘာမှမကြားပါဘူး၊ ဘုန်းဘုန်းဘုရား ၊ညွှန်ကြားချက်လည်း ဘာမှ မရှိပါဘူး ဘုန်းဘုန်းဘုရား။
ဦးဝီရသူ ။ ။ သြော်။
ဦးကျော်လှိုင်။ ။ တပည့်တော်တို့ကို ဘာမှလည်း မညွှန်ကြားသေးပါဘူး ဘုရား။ တပည့်တော်တို့လည်း ဒါကဟို ဆရာတော်က မန္တလေးက ဖြစ်နေတော့ ဒီဥစ္စာကို တပည့်တော်တို့ကို ပို့ခိုင်းလိုက်လို့ပါ ဘုန်းဘုန်းဘုရား။ ဆက်ကပ် ခိုင်းတာပါဘုရား လေးလေးစားစား ၊ တပည့်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်သွားကပ်ပါလို့ ရန်ကုန်တိုင်း သာသနာရေးမှူးရုံးက ချိတ်လာလို့ပါ ဘုန်းဘုန်းဘုရား။
ဦးဝီရသူ ။ ။အခု ကျုပ်က ဘာလုပ်လို့ သြဝါဒ ခံရမှာလဲ။
ဦးကျော်လှိုင်။ ။ သူကဒီလိုဗျ ဘုန်းဘုန်းဘုရား။ နိုင်ငံတော် သံဃာ မဟာ နာယက၏ ရည်ညွှန်းချက်ပါ စာဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကျောက်တံတားမြို့နယ် မဟာဗန္ဓုလ ပန်းခြံရှေ့ ကားပါကင်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပါ ပုဒ်မ ၅၉ (စ) ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး နှင့် ပုဒ်မ ၂၆၁ ပြင်ဆင်ရေး လူထု ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွင် ပါဝင်ဟောပြောခဲ့သော ဦးဝိစိတ္တာဘိဝံသ (ဦးဝီရသူ) အား နောက်နောင် ထိုကဲ့သို့ လူမူရေးကိစ္စများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မူ မပြုရေး ခေါ်ယူသြဝါဒပေးရန် အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ဆောင်ရွက်မူ ပြီးစီးမူ အခြေအနေအား ပြန်လည်တင်ပြရန် အကြောင်းကြားခဲ့လို့ပါ ဘုရား ။ နိုင်ငံတော် သံဃာနာယက အဖွဲ့ရဲ့ ၁၇ ရက် ၅ လ ၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စာအမှတ် ၀၆၂ / ၁၅ -၁၂ / ၅ / သာ - မဟန ကပါဘုရား ။ အဲဒီဟာနှင့် ရည်ညွှန်းပြီးတော့ လာတာပါဘုရား ။ ဘုန်းဘုန်းရှိလို့ရှိရင် တပည့်တော်တို့ လာကပ်လိုက်ပါ့မယ် ၊ဘုန်းဘုန်း ဘုရား ။
ဦးဝီရသူ ။ ။ ဒကာကြီး အဲ့ဒီလူမှုရေးကိစ္စဆိုတာ ဘာလဲမသိဘူးနော်။
ဦးကျော်လှိုင်။ ။ လူမှုရေးကိစ္စလို့ ဘုန်းဘုန်း ၊ အဲ့ဒီမှာဟောပြောခဲ့လို့ပေါ့ ခင်ဗျာ။ ဒါလူတွေကိစ္စဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါပဲ။ ဘုန်းကြီးတွေ၊ ရဟန်းတော်တွေရဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါပဲ ဘုရာ့။
ဦးဝီရသူ။ ။ ဘုရားက မယား ၇ မျိုး၊ လင် ၈ မျိုးတောင် ဟောထားတာနော်၊ အိမ်ထောင်သားမွေးခန်းတွေပါ အကုန်ဟောထားတာ အဲ့ဒါက လူမှုရေးမဟုတ်ဘူးလား။ ခင်ဗျား အဲ့ဒီလူမှုရေးဆိုတာကိုတော့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပေးနိုင်မှ ဖြစ်မယ်နော်။
ဦးကျော်လှိုင်။ ။ အဲ့ဒီကျတော့ ဖွင့်ပါလိမ့်မယ်ဘုရား၊ တပည့်တော်တို့ဆီက ထွက်စာမဟုတ်တော့ တပည့်တော်တို့ဆီကတော့ ဖွင့်ဖို့ တာဝန်မရှိပါဘူး ဘုရား။ တပည့်တော်တို့ကို ကပ်ပေးပါဆိုလို့သာ တပည့်တော်တို့က လာကပ်ရတာပါ ဆရာတော်ဘုရား။
ဦးဝီရသူ ။ ။ မဟုတ်ဘူးလေ၊ ကျုပ်က ခင်ဗျားတို့ကို ပြန်ပြီးတော့ ဒီလို ဒီလို ပြောမယ်လေ။ ခင်ဗျားတို့က ပြန်တော့ အစီရင်ခံစာတင်ပေးမှ ဖြစ်မှာပေါ့။
ဦးကျော်လှိုင်။ ။ အဲဒါကျတော့ ရန်ကုန်တိုင်း သံဃာ့နာယကနဲ့ ၊ တပည့်တော်ကိုကျတော့ စာကပ်ခိုင်းတာဆိုတော့လေ၊ တပည့်တော်ကျတော့ အဲ့ဒီလိုလုပ်ပိုင်ခွင့်တော့ မရှိဘူး ဘုန်းဘုန်း။ တပည့်တော်ကို ဒီဟာလေးပို့ပေးပါဆိုလို့သာ ပို့ပေးတာပါဘုရား၊ ဆရာတော်သည် မန္တလေးမှာ သီတင်းသုံးလို့ တပည့်တော်တို့ကို ဒါလေးပို့ပေးပါဆိုလို့ ဒီဟာလေးပို့ပေးရတာပါ။
ဦးဝီရသူ ။ ။ မဟုတ်ဘူးလေ၊ စာတော့ ပို့ပြီ။ ဆရာတော်ကတော့ ဒီလို ဒီလို မိန့်လိုက်တယ်။ အဲ့ဒါတော့ အစီရင်ခံစာ ပြန်တင်ဖို့တော့ လိုမယ်ထင်တယ်။
ဦးကျော်လှိုင်။ ။ တပည့်တော်တို့ကို မညွှန်ကြားဘဲ သွားတင်လို့ကတော့ မရဘူးဘုရာ့။ တပည့်တော်တို့ဆီ ညွှန်ကြားမှ ဆောင်ရွက်လို့ရမှာပါ ဘုရာ့။ ဘုန်းဘုန်းက ရုံးသဘော တပည့်တော်တို့ထက် ပိုသဘောပေါက်ပါတယ်။ တပည့်တော်တို့ဆီကိုလည်း မိတ္တူပို့ပါတယ်။ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးဆိုပြီးတော့လေ။
ဦးဝီရသူ ။ ။ ဟုတ်လား။ ကျုပ်တော်တော် ဆိုးပုံရတယ်နော်။ ရန်ကုန်ကို ခေါ်ဆုံးမမှာဆိုတော့။
ဦးကျော်လှိုင်။ ။ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆရာတော် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာက ရန်ကုန်မှာမို့လို့သာလျှင် ရန်ကုန်မှာ လုပ်မှာပါဘုရား။ အဲ့ဒီသဘောမျိုးပါ။
ဦးဝီရသူ ။ ။ ဟိုအရင်တုန်းကတော့ ကျုပ် တန့်ကြည်တောင်စာအုပ်ထုတ်တုန်းက ၂၀၀၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတုန်းက တစ်ခါ ကျုပ်ကမ္ဘာအေးမှာ လက်မှတ်ထိုးခဲ့ရသေးတယ်။ ထောင်ကထွက်လာတော့ သမိုင်းရဲ့တရားခံ စာအုပ်ထုတ်လို့ ဆိုပြီးတော့ မဟန ညွှန်ကြားချက်နဲ့ ဒီက မဟန ၄၇ ပါးထဲမှာပါတဲ့ ဆရာတော် ဦးကေသရက ခေါ်ပြီးတော့ နောက်နောင် ဆက်မထုတ်ဘို့ သတိပေးတယ်ပေါ့ဗျာ။
ဦးကျော်လှိုင်။ ။ အဲ့ဒီတုန်းက ဘုန်းဘုန်း သရက် ဦးကေသရ ထင်တယ်နော် ဘုန်းဘုန်း။
ဦးဝီရသူ ။ ။ မဟုတ်ဘူး၊ ဒီ.. မစိုးရိမ်တိုက်သစ်ကလေ။
ဦးကျော်လှိုင်။ ။ သြော် .. တပည့်တော်တို့ ဒီ .. ဘုန်းကြီးကေ လား ဘုရာ့။ တင်ပါ့ .. တင်ပါ့။
ဦးဝီရသူ ။ ။ အဲ့ဒီတုန်းကလည်း ဒီစာအုပ်ကို နောက်နောင် ဆက်မထုတ်ဘို့၊ မဖြန့်ချိဘို့ပေါ့၊ သြဝါဒပေးတယ်။ သတိပေးတယ်ပေါ့နော်။ အခုလည်း ဆူးလေ ဟောပြောပွဲ လုပ်လို့ သတိပေးတယ်ဆိုတော့ ကျုပ်က တော်တော့ကိုဆိုးတာပေါ့နော်။
ဦးကျော်လှိုင်။ ။ တပည့်တော်တို့ကတော့ဒီလိုပါပဲဘုရား။ ဒီဟာလေး ကပ်လိုက်ပါ၊ ရန်ကုန်တိုင်း သာသနာရေးက တပည့်တော်တို့ဆီ ဒီဟာလေး ကပ်လိုက်ပါဆိုပြီးတော့ ဆက်သွယ်လာတာပါ။ ဆရာတော်သည် မန္တလေးမှာ ရှိနေတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ သွားကပ်ပေးပါမယ်။ အဲ့လိုပဲ ပြောလိုက်ပါတယ် ဘုန်းဘုန်း။ မနေ့ကတုန်းက ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ အကြောင်းကြားပါတယ်။ ဒီနေ့လည်း အမြန်ချောပို့နဲ့လည်း ပါပါတယ်ဘုရား။ ၂ စုံပါ။ ကားကြီးဝန်းနဲ့လည်း ပို့လိုက်ပါတယ်။ ရွှေမန်းသူဂိတ်နဲ့လေ။ ဘုန်းဘုန်းရှိရင် တပည့်တော်တို့က တခါတည်းကပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ ဘုန်းဘုန်း ဖုန်းနံပါတ်ကို ဆက်လိုက်တာပါ။ ဒါကလည်း ဒကာကြီးရဲ့ ရုံးကဖုန်းပါဘုရား၊ တိုင်းသာသနာရေးရဲ့ ရုံးကဖုန်းပါဘုရား။ ဘုန်းဘုန်း ကိစ္စရှိရင်လည်း ခိုင်းပါဘုရား၊ မှတ်ထားပါဘုရား။
ဦးဝီရသူ ။ ။ ခင်ဗျားတို့ သာသနာရေးက ဘုန်းကြီးတွေ ထောင်ချဖို့ တရားလိုပဲ လုပ်ပြီးတော့၊ ဘုန်းကြီးတွေ သာသနာကိုကျတော့ ဘာမှလည်း အကာအကွယ်မပေးဘူးဗျနော် .. ။ ဥပမာ .ဆိုကြပါစို့ လှည်းကူးမှာလေ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကို လူတွေ ဝိုင်းရိုက်ကြတာကို .. လမင်းသာဆိုင်မှာလေ။ အဲ့ဒါ သာသနာရေးက အကာအကွယ် ဘာမှမပေးဘူးဗျနော်။ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကို အရက်သမားတွေ ၄ ၊ ၅ ယောက် ဝိုင်းရိုက်ကြတာလေ။ အဲ့တာကို ကမ္ဘာအေးက မဟနဆရာတော်တွေတို့ သာသနာရေးဌာနတို့က အကာအကွယ် လုံးဝမပေးဘူး။ တစ်လုံးတစ်လေတောင် ဝင်ပြီးတော့ ရပ်တည်မပေးဘူးပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့့် ဘုန်းကြီးတွေကို တရားစွဲဖို့ကျတော့ သာသနာရေးဌာနကို တရားလိုလုပ်ခိုင်းပြီ။ သာသနာရေးဌာနကပဲ တရားစွဲနေတာ တွေ့တယ်နော်။ အဲ့ဒါ ဘာလဲ မသိဘူးဗျာ။ ကမ္ဘာအေးက ဘုန်းကြီးတွေကို တရားစွဲဖို့ပဲ ဖွဲ့ထားတာလား ဘာလားမသိဘူး။ အဲ့ဒါ ဒကာကြီး ဘယ်လိုလုပ်ကြမတုန်း။ ခင်ဗျား ပါတယ်မလား၊ မန္တလေး သပိတ်စခန်း တရားလိုထဲမှာလေ။
ဦးကျော်လှိုင်။ ။ အဲ့ဒီတုန်းက မန္တလေးခရိုင် သာသနာရေးမှူး တရားလိုလုပ်တာဘုရာ့။
ဦးဝီရသူ။ ။ ခင်ဗျား သက်သေတော့ပါတယ် မဟုတ်လား။
ဦးကျော်လှိုင်။ ။တပည့်တော် သက်သေအနေနဲ့လည်း မပါလိုက်ဘူးဘုရား။ အဲ့ဒီအချိန်က ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးဆိုတော့လည်း။ တိုင်းသာသနာရေးမှူးကတော့ သက်သေတော့ ပါတယ်ဘုရား။
ဦးဝီရသူ ။ ။ အေး .. အဲ့ဒါ သတိတော့ ထားပေါ့ဗျာ။ ခင်ဗျားတို့ကို သာသနာတော်ကို စောင့်ရှောက်ဖို့ ဖွဲ့စည်းထားတာ။ ခင်ဗျားတို့က ဘုန်းကြီးတွေကို ထောင်ချနေရင်တော့ သိပ်မကောင်းဘူးဗျ နော် .. ။
ဦးကျော်လှိုင်။ ။ တင်ပါ့ဘုရား . တင်ပါ့ တင့်ပါ့။
ဦးဝီရသူ ။ ။ ခင်ဗျားတို့ ဘုန်းကြီးတွေကို ထောင်ချမယ့်အစား။ အလုပ်သာထွက်လိုက်ပါဗျာ။ အလုပ်ထွက်တာက ထမင်းငတ်ရင် တစ်ဘဝပါပဲ။ ဘုန်းကြီးကို ထောင်ချတာက တစ်သံသရာလုံးပဲ။ ခင်ဗျားလည်း စာတွေ သင်ခဲ့တာပဲ .. နော်။
ဦးကျော်လှိုင်။ ။ တင်ပါ့ … တပည့်တော်တို့လည်း စာတတ်ပေတတ်ပါပဲ .. ဘုန်းဘုန်းလည်း သိပါတယ်။
ဦးဝီရသူ ။ ။အေး .. အဲ့ဒါကြောင့် ဘုန်းကြီးထောင်ချမယ့်အလုပ်ကို တစ်ဘဝ တစ်နပ်စာလေးကို ထောက်ပြီးတော့ မလုပ်ပါနဲ့ နော်။
ဦးကျော်လှိုင်။ ။ အဓိကကတော့ ဘုန်းကြီးထောင်ချတယ်ဆိုလည်း အရမ်းတော့ မလုပ်ပါဘူး။ သူတို့ကလည်း ပြစ်မှုကျူးလွန်လို့သာလျင် တပည့်တော်တို့ကို စွဲခိုင်းလို့သာလျှင် စွဲရတာပါ ဘုန်းဘုန်း။
ဦးဝီရသူ ။ ။ မှန်တယ်လေ.. အဲ့ဒီထဲမှာ ဦးဇင်းပေါက်ဆိုတဲ့ ကိုယ်တော်လေးက ခင်ဗျားတို့ တပ်ထားတဲ့ ခေါင်းဆောင်ထဲမှာလည်း မပါဘူးလေ။ ဓါတ်ပုံထဲမှာလည်း မပါဘူးလေ။ သံချပ်တွေ တိုင်ဆိုတာတွေ၊ဆောင်ပုဒ်တွေ ဆိုတာတွေလည်း မပါဘူးလေ၊ ကြွေးကြော်သံတွေ မအော်ဘူးလေ။ အထောက်အထားဘာမှ မရှိဘဲ ချပစ်ကြတာတွေ မဟုတ်လား။ ပေါက်ကိုယ်တော်လေ။ သူက ဘယ်ထဲမှ မပါဘဲ ဥစ္စာကြီးကို။ အဲ့ဒါကိုဖမ်းပြီးတော့ ထောင်ချပစ်တာလေ။ လက်ထိပ်က ခတ်သေးတယ်၊ ကားပေါ်မှာလေ။ အဲ့ဒီတော့ ခင်ဗျားတို့ ဆရာတော်တွေကိုလည်း စပ်မိရင် လျောက်လိုက်ပေါ့ဗျာ။ သံဃာ့နာယကက သံဃာတွေကို အကာအကွယ်ပေးရမှာ၊ သံဃာ့နာယကက သံဃာတွေကို နှိပ်ကွပ်တာမျိုးကတော့ ဝီရသူက လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ နော့်။
ဦးကျော်လှိုင်။ ။ တင့်ပါ့ .. မှန်ပါတယ်ဘုရာ့။
ဦးဝီရသူ ။ ။ ခင်ဗျားတို့လည်း သာသနာရေးဌာနဆိုတော့ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ကြပါဗျာ။ သာသနာကို မဖိနှိပ်ကြပါနဲ့နော်။
ဦးကျော်လှိုင်။ ။ တပည့်တော်တို့လည်း စောင့်ရှောက်ပါတယ် ဘုရား။ ဒါတွေကလည်း သူတို့ရဲ့ နှစ်ဘက်ပေါ့ ဘုရား။
ဦးဝီရသူ ။ ။အဲ့ဒါဆိုရင် ဒကာကြီးတို့က အခုဘယ်မှာလဲ။
ဦးကျော်လှိုင်။ ။ တပည့်တော်တို့က ရုံးကနေ လာခဲ့ရမှာပါ ဘုန်းဘုန်း။
ဦးဝီရသူ ။ ။လာခဲ့ပါ ဒကာကြီးတို့ ရုံးက ဘယ်အချိန်လောက် ထွက်နိုင်မလဲ။
ဦးကျော်လှိုင်။ ။ ခု ထွက်ခဲ့ပါမယ် ဘုရား။
ဦးဝီရသူ ။ ။ ထွက်ခဲ့တော့လေ။ ဆွမ်းစားပြီးတာနဲ့ ကွက်တိပဲ။
ဦးကျော်လှိုင်။ ။ တင်ပါ့ဘုရား။ ဦးတင်ပါတယ် ဘုရား။ ။
ဦးဝီရသူကို စွပ်စွဲထားတဲ့ အမှုကို လာရောက်ဖြေရှင်းဖို့ပြော